UBPorts na ahoana no tokony hisian'ny Ubuntu Phone | Ubunlog
UBPorts na ahoana no tokony hisy ny Ubuntu Phone
Joaquin Garcia | | About us, Ubuntu, Ubuntu Phone
UBPorts dia naka ny fivoaran'ny Ubuntu Phone fotoana vitsy lasa izay. Tetikasa iray nilaozan'ny Canonical na navelany teo am-pelatanan'ny Community ary tsy toy ny tetikasa hafa, UBPorts sy Ubuntu Phone dia mbola mitohy tsara kokoa noho ny hatramin'izay. Vao haingana izy ireo no nandefa gazety iray isam-bolana tao amin'ny tranonkala ofisialin'ny tetikasa izay niresahan'izy ireo momba ny satan'ilay tetikasa sy ireo vaovao farany, izay maro.
Ny Ubuntu Phone dia tsy mandroso fotsiny fa nanatsara ny fantsom-pivoarany, mamorona tahiry fanandramana ho an'ireo izay sahy manao ny tena mampidi-doza na ny fitaovana tsy mbola nahavita fampandrosoana.
OTA-2 dia mitohy mivoatra, ary mety ho vonona amin'ny faran'ity volana ity. Ity fanavaozana vaovao ity dia tsy manitsy ny bibikely fotsiny fa mampiditra fanavaozana ny motera tranokala Oxide izay mifanaraka amin'ny kinova 58 an'ny Chrome. Ny tanjon'ny ekipa fampandrosoana an'i Phone Phone dia ny mamoaka kinova RC iray isan-kerinandro, mahatonga ny fivoaran'ny Ubuntu Phone ho an'ny terminal dia mahomby kokoa.
Momba ireo terminal any amin'ny Ubuntu Phone, fantatray izany Meizu Pro 5 dia ho lasa ampahany amin'ny fampandrosoana mavitrika ny UBPorts, mampiditra ny famoahana lehibe manaraka izay hiorina amin'ny Ubuntu 16.04. Mikasika ireo terminal BQ, UBPorts dia efa niresaka tamin'ny BQ hanokatra azy ireo saingy hatreto dia tsy azo atao izany noho ny fameperana sasany ataon'ny BQ amin'ireo fitaovana, na dia tsara aza fa samy manana fifandraisana mavitrika ny orinasa sy ny mpamorona.
Ho fanampin'ireo vaovao ireo, UBPorts dia mitady mpikaroka mahalala ny fiteny C ++, Go, Vala, QML na C, hamoronana sy hitazonana fampiharana, fampiharana toa an'i Dekko izay ampian'ilay tetikasa hijanona ao anatin'ny Ubuntu Phone.
UBPorts tsy izany ihany mitady mpamorona fa misokatra amin'ny fanomezana ary efa namorona podcast izay hiresahan'izy ireo momba ny Community and the Ubuntu Phone Project. Ireo singa izay tsy nananan'ny Ubuntu Phone na Ubuntu Touch teo aloha ary tsy isalasalana fa manampy amin'ny fampivoarana ny rafitra miasa sy ny ekosistema Ubuntu Phone.
Araka izany, toa mandeha tsara ny fampandrosoana, lalana tokony ho narahin'i Canonical fa tsy nangataka ny vola nangatahiny ary nanidy ny fivoarany ho an'ny Community. Indrisy ny isan'ny fitaovana dia mbola kely foana saingy iray taona teo ho eo izy ireo, ka amin'ny herintaona dia mety hitombo be ny isan'ireo fitaovana Tsy mieritreritra ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » UBPorts na ahoana no tokony hisy ny Ubuntu Phone
Mahamenatra ny nataon'ny Canonical. Nahaliana tokoa ilay tetikasa ary ilay "fampitambarana" izay tsy tonga akory dia mety nahasarika mpampiasa maro izay mety nanampy tamin'ny fitomboany sy nahafahany nitombo. Manaraka ny UBPorts aho fa heveriko fa ny zavatra Plasma dia manana vintana tsara kokoa hitranga. Ekipa lehibe kokoa izy io ary mampiasa teknolojia ankehitriny.
Opic dia hoy izy:
Heveriko fa tokony handinika ny safidy ahafahana misintona ny ROM (cyanogen / lineageOS) izy ireo mba hahamora kokoa ny fidirana amin'ny Ubuntu Phone fa tsy miankina amin'ny fanomezana na tsia azy ireo ny mpanamboatra hivarotra fitaovana iray miaraka amin'ny OS.
Valiny amin'i Opik
Oscar Cervantes dia hoy izy:
Ny famakiana ity lahatsoratra ity dia namerina ahy ny eritreritro ho an'ny Ubuntu Phone. Mankasitraka ny ekipan'ny UBPorts aho noho ny nanohizany io OS finday io, satria mihabe ny isan'ny fitaovana azo havaozina (novidiako ny Meizu Pro 5 ho an'ny Ubuntu Phone fotsiny), fa tonga eo amin'ny ombelahin-tongony Achilles, ireo fampiharana malaza izahay. Raha tsy misy azy ireo (whatsapp, sns) dia rafitra very be ho an'ny besinimaro izy io ary raha tsy misy ny mpanjifa dia tsy misy tohana.
Valio amin'i Óscar Cervantes
h Anonyme dia hoy izy:
Alatsinainy 11 septambra 2.017.
Manaraka ny tetikasa aho. Namaky vaovao momba ny Ubuntu Touch - Ubuntu Phone aho nandritra ny herintaona sy tapany.
Mampiasa telefaona Bq miaraka amin'ny UbuntuPhone aho, mbola mampiasa ilay rafitra nafoin'ny canonical.
Ny antony iray hampiasana ity rafitra ity dia ny filaminana sy ny fiainana manokana, indrindra ity farany.
Efa ela aho no namaky ireo mpandinika momba ny UbuntuTouch ary toa nitovy foana ny fitarainana, raha tsy eo ny güasäp dia raha tsy misy programa intsony.
Guugle dia miorina amin'ny kernel linux, maimaim-poana. Ny rindranasa apetrakao dia mampiasa ny motera java, izay rafitra miasa hafa. Mihazakazaka rafitra eo ambanin'ny rafitra hafa ianao, izay mandany loharanon-karena maro be. Mandritra izany fotoana izany, ho takalon'ny fiainanao manokana na angon-drakitrao manokana, omena ny tombotsoany fa andoavanao be loatra ianao. Ny mpampiasa dia te-hitahiry ireo € uros ireo amin'ny antso mampiasa mpitondra hafatra antsoina hoe guasap na sns ...
Izay no resahina, mitahiry vola kely. Izay mamaky dia hieritreritra ny zavatra mahazatra,.
Ataoko angamba fa nampiasa solosaina ianao ary mbola mampiasa ny rafitra güindos. Oviana no nanontaniana anao, rehefa mametraka programa, hahazoana alalana amin'ny sarinao, horonan-tsary na data-nao manokana? Ao amin'ny güindos equis pe, maicrofost dia nametraka mialoha ny firewall (amin'ny teny anglisy) ho toy ny fotony. Hanao ampinga eo amin'ny solosainao sy ny tamba-jotra. Fa maninona Hiarovana anao. Momba ny inona? AMIN'NY FIVAVAHANAO SY NY DATAO.
Mbola tsy nihinana be loatra ny tsiambaratelon'ny olona androany androany miaraka amin'ny alalana amin'ny toerana, fidirana amin'ny sary, horonan-tsary ary antontan-taratasy.
Tsy maintsy niandry ny kinova 7 an'ny android ve ianao mba hanana firewall ho an'ny rafitra? Fa maninona no tsy teo aloha? Rehefa afaka taona maro dia efa fantatr'izy ireo ny angon-drakitrao, ankehitriny inona koa no omeny ...
Toy ny rafitra teo aloha tao amin'ny trano maicrofost, alohan'ny güindos equis pe, ohatra mazava eb güindos 98 izay ahafahan'ny olona avy amin'ny tamba-jotra manana fahalalana vitsivitsy, miditra ao amin'ny solo-sainao ary manao izay tiany atao.
Noho io antony io, raha vantany vao manana ny angon-draketraky ny ankamaroan'ireo izay matetika mampiasa PC izy ireo, aorian'ny taona maro tsy misy fiarovana, dia ampidirin'izy ireo ao anaty rafitra ny firewall default.
Manaova fikarohana momba ny maicrosoft and oracle, taona 1998 eo ho eo. Izay nisy ny fitsarana teo amin'ny orinasa roa tonta ary nifarana tamin'ny fomba ratsy. Java dia efa napetraka tao amin'ny güindos ary nanomboka tamin'io fitsarana io dia tsy misy intsony. Raha mila java ianao dia mila misintona sy mametraka azy, ankoatry ny rafitra.
Raha hiverenana ny zava-dehibe, amin'izao fotoana izao ny tsy fanananao güasap dia olana amin'ireo tsy miraharaha ny angon-drakitra (jereo wikinierda).
Zava-dehibe kokoa ny fitehirizana amin'ny antso ireo zavatra adaladala izay tsy nety ho tanterahina tamin'ny vidiny mitovy.
Fa ny fananana güasap, ny hadalana 99% alefa, amin'ny fampiasana ny angona, satria vidiny kely dia efa voaloa. Jereo, inona no notahirizinao huh.
Ny Ubuntu Phone na Ubuntu Touch, dia manome na manome anao izany tsiambaratelo izany, io safidy io avy amin'ilay rafitra iray ihany hanomezana alàlana na tsia amin'ny risikao, nefa tsy mila misintona programa iray, izay aloa matetika mba hifehezana.
Efa, android ny fon'ny rafitra, izay raha ny hevitro manokana dia tsy tiako. Avy eo dia najanoko ilay rafitra rehefa manomboka mahasoa izy io. Ary, ankehitriny, manantena isika fa, satria tsy mitady tombom-barotra, vondron'olona iray izay niara-namory ny tetikasa indray, izay manome voninahitra azy ireo, dia manaja azy ireo aho, manantena aho fa hanao rafitra tena tsara izy ireo, saingy izao dia mbola hanohy hampiasa ilay kernel tany am-boalohany. Manàna fotoana mahafinaritra amin'ny güasap sy zavatra hafa.
Mamaly an'i hAnonimo
Flathub dia efa mamela anao hametraka fampiharana mivantana avy amin'ny tranokalanao
Gifcurry, mamorona GIF-nao manokana avy amina video mora foana